Tartanka Quraanka Kariimka ah oo lagu soo gebogabeeyay magaalada Hargeysa iyo xaflad balaadhan oo loogu qabtay Masjidka Cali Mataan
Hargeysa Sabti 4 August 2012 SMC
Tartanka Quraanka Kariimka ah oo lagu soo gebogabeeyay magaalada Hargeysa iyo xaflad balaadhan oo loogu qabtay Masjidka Cali Mataan. Tartanka Qur’aanka Kariimka ah ee bisha Ramadaan sannad walba lagu qabto masaajidka Cali Mataan ee magaalada Hargeysa, ayaa lagu soo gebogabeeyey shalay alaabmarino qaali ah oo la guddoonsiiyey dhallinyaradii ku guulaysatay. Tartankan oo ay soo qabanqaabiyaan guddi ka mid ah culimada waaweyn reer Somaliland oo muddadii bisha Ramadaan si xdhiidh ah u socday, isla markaana ay maalgeliso shirkadda Dahabshiil ilaa tobankii sanno ee u dambeeyey, waxa sannadkan ka qaybgalay 70 wiil oo ka kala socday gobollada Hargeysa, Sanaag, Saaxil, Sool, Togdheer, Gabiley iyo Gobolka Awdal oo 34 ka mid ahi ku tartamayeen xifdiga soddonka Jus iyo 36 ku tartamayey shan iyo tobanka Jus ee Qur’aanka Kariimka ah, iyadoo dhinaca hablahana loo qabtay soddon hablood oo laga soo kala xusay madarasadaha iyo mac-hadyada magaalada Hargeysa. Tartanka Qur’aanka Kariimka ah oo siddeedii wiil ee ugu sarreeyey oo ay ku jiraan labada wiil ee ku kala guulaystay kaalmaha kowaad ee soddonka jus iyo shan iyo tobanka jusna la guddoonsiiyey alaabmarino qaali ah oo isugu jira lacag adag iyo alaabooyin kale, waxa wacdaro ka dhigay wiil aad u da’diisu tahay 8 sanno jir oo kaalinta afraad u galay tartankii soddonka jus, kaas oo ay culimadu ku tilmaameen in aanay weligood arag ilmo la mid ah oo Qur’aanka sidiisa u xafiday. Xaflad ballaadhan oo shalay galab loogu qabtay masaajidka Cali Mataan waxa ka qaybgalay Wasiirka Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Somaliland, Maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil oo ay wehelinayeen saraakiil ka kala tirsan shirkadaha Dahabshiil iyo Somtel, culimaa’udiin badan iyo boqolaal dadweyne ah, iyadoo xafladaasi si toos ah looga tabinayey telefishanka HCTV oo ay u fududaysay shirkadda Somtel. maamka Masaajidka Cali Mataan Sheekh Maxamed Aadan Muxumed oo ka mid ah guddiga culimada tartanka qabata oo ugu horreyn xafladaasi ka hadlay, ayaa sheegay in 70 dhallinyarada ka qaybgalay tartanka xifdiga Qur’aanka Kariimka ah ay ka soo dhex baxeen in ka badan boqol iyo kontan arday oo ku kala sugan gobollada dalka oo soo codsaday tartanka, kuwaas oo imtixaanno lagu kala reebay. Waxaannu Sheekh Maxamed Aadan u mahadnaqay shirkadda Dahabshiil oo uu ku ammaanay maalgelinta ay muddada dheer la garab-taagnayd tartankan. Sheekh Ismaaciil Cabdi Hure (Ismaciil Dheeg) oo ka mid ahaa guddidii qabanqaabada tartankaasi xifdiga Qur’aanka kariimka ah, ayaa ka warramay heerarkii kala duwanaa ee uu tartanku soo maray muddo labaatan sanno gaadhaysa oo la qabanayey, isagoo sheegay inuu soo maray saddex marxalood oo kala ahaa xilligii bilowga oo ahayd sannadihii 1992-1994, xilligii soo shaac-baxa oo ku beegnayd sannadihii 1995 – 1999 iyo heerka saddexaad oo ah xilliga horumarka uu gaadhay xifdiga Qur’aanka kariimka ah oo weli lagu jiro.
“Waxaannu u mahadnaqaynaa shirkadda Dahabshiil ee dhawr iyo tobankii sanno ee u dambeeyey maalgelinaysay tartankan, waxaannu Alle ka baryeynaa inuu maalkooda u xifdiyo. Waxa kale oo aannu u mahadnaqaynaa guddigii culimada garsoorka ah iyo weliba bahda warbaahinta,” ayuu yidhi Sheekh Ismaaciil. Sheekh Maxamed Sh. Cumar Dirir ayaa madasha ka jeediyey khudbad ka warramaysa fadliga Kitaabka Qur’aanku leeyahay ee ay helayso cid kasta oo akhrida, kuna camal-fasha, kuwaas oo ay ka mid yihiin; inuu ehelkiisa u shafeeco qaadi doono maalinta Qiyaamaha, in ummadda Kitaabka Qur’aanka waynaysa uu Ilaahay kor u qaado, kuwa hoos u dhigana uu dulleeyo, in Nebigu (NNKHA) uu sheegay in dadka uu u khayr badan yahay qofka Qur’aaka barta ee dadkana baraa, in Ilaahay naxariis ku soo dejiyo goobta ama meesha lagu akhriyayo Qur’aanka,” ayuu yidhi Sheekhu. Sheekh Dirir waxa uu sheegay in ay umad ahaan Qur’aanka inagala gudboontahay in la ilaaliyo, in la wayneeyo oo la sharfo, in lagu cibaadaysto, in marka la akhriyayo la dhegaysto, in la wanaajiyo sida loo akhriyayo Qur’aanka, in Qur’aanka lagu camal-falo meel kasta nolosha dadka muslimiinta ah iyo in Qur’aanka la isku daweeyo. Maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Siciid oo xafladda ka hadlay ayaa soo dhaweeyey tartanka Qur’aanka Kariimka ah oo uu sheegay inuu yahay mid xalaal ah oo dhiirigelinaya dhallinyarada, isla markaana ay ku faraxsan yihiin shirkad ahaan inay kaalintooda ka qaataan tartanka iyo wax kasta oo dadka iyo dalkaba dan u ah.
“Runtii tartanka Qur’aanka iyo tartan kale oo kastaaba wuxuu qofka baraa inuu hiigsado meel kale oo ka sii fog halka uu joogo ama qof ka sarreeya oo uu doonayo inuu gaadho, markaa tartanka xalaasha ah sida kaa Qur’aanku waa mid cid walba guul u ah if iyo aakhiraba, xagga ganacsiga iyo xag walba in qofku haddii uu si xalaal ah u tartamo oo uu walaalkiisa la tartamaya ilaaliyo oo uu wanaag kula tartamo, iyadoo marar qaarkood aad meelahaa ka arkayso cay iyo wax xaasidnimo ku jirto, laakiin haddii sidaa xalaasha ah nolosha oo dhan loogu tartamo waxaan qabaa in if iyo aakhiraba lagu liibaanayo,” ayuu yidhi Cabdirashii Maxamed Siciid. Waxa kale oo uu ballanqaaday “Annagu shirkad ahaan mar walba wixii horumarkeena dhisaya ama diinteena, dhaqankeena iyo dhaqaalena sii horumarinaya waxaannu diyaar u nahay in aannu ka qaybqaadano.”
Wasiirka Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed oo soo gunnaanaday khudbadaha xafladda laga jeediyey, ayaa u mahadnaqay guddiga culimada ee tartanka qabatay, shirkadda Dahabshiil iyo ardayda ka qaybgashay iyo cid kasta oo ka gacan gaysatay. Waxa kale oo uu si gaar ah ugu mahadnaqay shirkadda Dahabshiil oo uu sheegay inay noqotay shirkadda keliya ee ku guulaysatay inay mar walba maalgeliso tartannada Qur’aanka. Waxa kale oo uu ka warramay xidhiidhka ka dhexeeya Kitaabka Qur’aanka Kariimka ah iyo bisha barakaysan ee Ramadaan, isagoo xusay in Ilaahay Qur’aanka soo dejiyey bil Ramadaan, isla markaana uu ka jiro habbeenka barakaysan ee Laylatul-qadriga. Sidaa darteedna loo baahan yahay in bishan aad loogu dadaalo oo la wayneeyo.
“Ujeedada kale ee laga leeyahay qabashada tartankan ee bisha Ramadaan in lagu dhiirigeliyo ubadka yaryar, laguna barbaariyo, si aynu u helno ubad xambaara Kitaabka Ilaahay. Annaguna xukuumad ahaan waanu soo dhawaynaynaa oo mar walba diyaar ayaanu u nahay in aannu dhiirigelino” ayuu hadalkiisa kaga baxay Sheekhu. Gebogabadii waxa halkaasi albaalmarino muhiim ah lagu guddoonsiiyey shantii arday ee kaalmaha hore u galay tartankii 30 Jus ee xifdiga Qur’aanka ah iyo saddexdii u sarreeyey tartankii 15-ka Jus, kuwaas oo la siiyey abaalmarin lacageed oo u dhaxaysa $250 ilaa $700 doollarka Maraykanka iyo alaab kale iyo telefoono ay ugu deeqday shirkadda SOMTEL, halka dhammaan inta kale ee 70 arday iyagana la siiyey abaalmarino lacagi ku jirto. Magacyada shanta arday ee kaalmaha u sarreeya ku guulaystay tartanka xifdiga Qur’aanka Kariimka iyo abaalmarinta la siiyey;
1. Waxa kaalinta kowaad ku guulaystay Khaalid Mustafe Aadan oo ka socday gobolka Togdheer, waxaanna abaalmarin loo siiyey Kitaab elektaroonik marka qallinka la saaro hadlaya oo ay ku jiraan Soddonka Jus ee Qur’aanka, kutubta axaadiista Bukhaari iyo Muslim iyo weliba Qaamuus luuqado kala duwan ah (waxa ku deeqay kitaabka muwaadin magaciisa la yidhaa Xuseen Quulle), shahaado, telefoon moobil ah, rikoodh, saacad, cadar iyo lacag qadarkeedu dhan yahay 700$ (toddoba boqol oo doollar). 2- Kaalinta labaad waxa galay Sakariye Faysal Maxamed oo ka socday Gobolka Hargeysa, waxaanna ku guulaystay Kitaab Qur’aan qoran ah, shahaado, moobil, rikoodh, saacad iyo lacag dhan $500. 3- Kaalinta saddexaad Mubaariga Khaliif Yuusuf oo ka socday Gobolka Hargeysa, waxaannu ku guulaystay Kitaab Qur’aan ah, shahaado, moobile, rikoodh, saacad iyo lacag dhan $400. 4- Kaalinta Afraad waxa galay Ibraahim Maxamuud Axmed Waxaana uu ka socday Gobolka Hargeysa waxaana uu hadyad ahaan u helay Kitaab Qur’aan ah, shahaado, moobile, rikoodh, saacad iyo lacag dhan $350. 5- Waxa kaalinta Shanaad galay Ridwaan Xusseen Caalin waxaana uu ka socday Gobolka Hargeysa waxaana uu hadyad ahaan u helay Kitaab Qur’aan ah, shahaado, moobile, rikoodh, saacad iyo lacag dhan 300$ Magacyada saddexda arday ee kaalmaha hore u galay tartanka 15-ka Jus waxay kala yihiin; 1- Shan iyo Tobanka Jis waxa kaalinta Koowaad u galay Shaafici Jaamac Jibriil oo ka socday gobolka hargeysa waxaana hadyad ahaan loo siiyey Kitaab Qur’aan ah, shahaado, moobile, rikoodh, saacad iyo lacag dhan $350. 2- Kaalinta labaad Cabdixakiin Axmed Saxardiid oo ka socday Gobolka Hargeysa, waxa la siiyey Kitaab Qur’aan ah, shahaado, moobile, rikoodh, saacad iyo lacag dhan $300. 3- Kaalinta saddexaad waxa galay Cabdisalaam Axmed Cali oo ka socday Gobolka Gabiley waxaana hadyad ahaan loo siiyey Kitaab quraan ah, shahaado, moobil, rikoodh, saacad iyo lacag dhan $250. Jamaal Ibrahim Maxamed